Famantarana ny làlan-doha
Any ivelan'ny fivarotana maoderina fiarakodia na katalaogin'ny autoparts, ianao dia tsy mahavita mahita girondo-doha. Na dia miafina miafina aza, ny loha loha, iray amin'ny i4 na roa ao amin'ny V6 na V8, dia manao asa goavana maro. Satria tsy voatery nesorina izy ireo, ny fiatoana amin'ny lohany dia tena marefo, miatrika ny fiovaovan'ny hafanana sy ny fanerena amin'ny kilaometatra an'arivony. Raha toa ka tsy mahomby ny loha loha, izay matetika no antsoina hoe "fantsom-bozaka mitongilana", dia mety hiteraka tondra-drano, fipoahan'ny solika, na ranon-tsavoka. Miankina amin'ny henjana, ny valiny dia mety ho fientanam-po fotsiny na mety hisakanana ny môtô tsy mandeha tsara , na oviana na oviana.
Inona no atao amin'ny gorodona?
Ny tombo-kase an'ny tombo-kase eo anelanelan'ny loha sy ny lozam-bary. http://www.gettyimages.com/license/646740348
Ny dian-kaparaky ny lohany dia napetraka eo anelanelan'ny baoritra môtô, misy ny basy sy ny pistons, ary ny loha-bidy, izay misy ny familiana fiara sy valifaty. Ny ankamaroan'ny fitaovana maoderina dia mampiasa fonosana (MLS) matevina maromaro (MLS), raha ampiasain'ny fitaovam-piadiana maoderina ny asbestos na ny grafita. Ny fitaovana sasany dia mety hampiasa kapa feno kapa feno varahina. Na inona na inona ny fitaovana, ny lohan'ny fanasan-doha dia misy karazany telo:
Fametahana Cylinder - Raha toa ka mihazakazaka ny motera, dia mety hahatratra haingana mihoatra ny 700 psi ny angovo azo avy amin'ny lozam-pifamoivoizana, ary mety hahatratra 2 000 psi ny dian-drivotra. Tafiditra eo anelanelan'ny lohan-doha sy ny tsatokaty moto, ny dian-kaparaky ny lohan-doha dia ahitana ireo tsindry ho an'ny fihenam-bidy sy fihenam-bidy. Ny MLS sy ny fiantohana lohan'ny dite dia matetika manana singa famehezana manokana natsangana manokana ho an'ity tanjona ity, raha toa kosa ny fantsom-piraketan'ny kapila varimbazaha dia mety mitaky fanodinana masinina mba hametrahana peratra toy izany.
Mitondra ranon-javatra - Ny elanelan'ny maotera sy ny solika dia ilaina ao amin'ny lozam-paosin'ny lozam-pifamoivoizana sy ny loha-bary, ary ny seranan-tsambo eo amin'ny lohan'ny dipoavatra dia mamela ny fifindran'ny aretina eo amin'ny roa. Ao amin'ny lohazy, ny milina mafana dia mitazona vovoka sy mampihena ny mari-pànana, raha toa kosa ny solika maotera dia manonitra sy manolotra tsindrio ny hydraulic, toy ny fe-potoana miabo.
Manana ranon-javatra - Amin'izay fotoana izay, ny vovo-drivotra moto sy ny dingan'ny solika dia mety hisaraka fotsiny amin'ny milimetatra vitsy monja. Ny dian-kaparaky ny lohany dia manakana ny rano tsy hifangaro. Ankoatra izany, ny gaza mandoro dia tsy misakana ny fandehanana mankany amin'ny ranon-tsavoka moto sy ny masinina ary ny mifamadika amin'izany. Miankina amin'ny endriny, ny dian-kaparaky ny lohany dia mety manana O-peratra hanatsarana ny famehezana any amin'ny faritra sasany.
Seven famantarana ny làlan-doha mipoaka
Ity jiro miboridana tampoka ity dia mety hitarika mankany amin'ny roa cylinders misfiring. https://www.flickr.com/photos/tonysphotos/6527707149
Raha toa ka tsy mahavita ny iray amin'ireo dingana telo ireo ny dian-kaparaky ny lohanao, dia mety tsy ho hita mazava ny valiny, arakaraka ny fomba tsy nahombiazan'ny loha. Ireto misy soritr'aretina maromaro amin'ny lohan-doha mipoaka sy ny fomba ahafahanao manamarina azy ireo:
Cylinder Misfire - Izany no tena eritreretin'ny ankamaroan'ny olona rehefa miresaka lohastron-doha. Amin'ity tranga ity dia tsy nahomby ilay perilan'ny famehezana manodidina ny cylinder. Satria tsy afaka manamboatra fanerena ampy ny cylindre, dia mety hiteraka fahalemena izany, raha tsy izany. Raha misy biriky roa , ny fifandimbiasana eo amin'ny sisiny mifanila, dia midika izany fa ny dian-kaparaky ny loha dia mihetsiketsika eo anelanelan'ny arina roa mifanongona. Fahita bebe kokoa amin'ny fametrahana head gasketes, tsy mahatsiaro ny MLS na ny loha loha varahina.
Fahavitan'ny riaka ivelany - Mety ho hita mazava tsara ny fivoahan'ny riaka, satria ho hitanao ny haavon'ny haavon'ny haavon'ny haavony na ny haingam-pandehan'ny rivotra, ary koa ny solika na ny rivotra mafana amin'ny motera, miala avy eo amin'ny kodiarana eo amin'ny lamosin'ny loto sy ny lohazy. Ny fampidirana ny tadiny avy any ambony, toy ny eo amin'ny loha solaitra na ny fantsakan-tsoavaly, dia mety ho antony iray ny lamosin'ny lamoria.
Tendrombohitra anatiny - Mety ho sarotra ny mahita azy na dia sarotra aza ny mamantatra, satria tsy afaka mahita izay mitranga amin'ny maso tsy mitongilana.
Raha noterena hiditra anaty horonan-tsakafo mahery ny solika, dia mety mahita marimaritra iraisana toy ny mayonnaise ianao, napetraka eo amin'ny kapaotin'ny radiatora na ao amin'ny fitahirizam-bary tafahoatra.
Etsy ankilany, raha voatery miditra ao amin'ny andalan-tsolika ny fantson-drano, dia mety hanamarika vovobony matevina ao amin'ny fonony na tsangatsangan'ny dite.
Raha voatery miditra ao amin'ny rafi-pandrefesana ny gazy misy gazy, dia mety hitarika lozaka sy moter amin'ny hafanana izany . Ny bobongolo ao amin'ny toeram-pisakafoanana mahatsiravina dia marika azo antoka amin'ny lamosin'ny lamosina.
Ny fanolanana miondrika ao anaty cylinder dia mety miteraka setroka fotsy amin'ny alokaloka , matetika amin'ny fanombohana, satria ny ranomandry eo ambany fanerena dia mitete ao anaty cylinder rehefa miala ny motera.
Amin'ny toe-javatra faran'izay henjana, ampy tsara ny fanamafisana ny lalan-drivotra mankany amin'ny bateria mba hitifirana hidrosta hydrostatic, na "hydrolock", ary fanimbana maotera maharitra.
Diagnostika sy fanamboarana lamosina loha
Fitaovana, fanofanana, ary fanandramana Ataovy ny Mechanic. http://www.gettyimages.com/license/88620858
Raha toa ianao na ny mpiasanao manam-pahaizana iray miampanga lohan-danja amin'ny loha, dia mety handany fotoana be ny diagnostika , satria mety hampiova ny soritr'aretina hafa ny fahadisoana hafa. Ny fanandramana fanasongadinana, ny fitsapa-poana, ary ny fisedrana dia mety takiana mba hamaritana raha diso ny fanondro-menaka na ny vokatry ny fahadisoana hafa, toy ny kitapom-basy, fitaovana fandefasana solika, zana-tsipika, valva, na olana amin'ny pistol.
Na dia tsy misy vidiny aza ny kitapom-bolongana iray, dia mety ho sarotra ny vidin'ny solika, fa mila manamboatra tanteraka ny motera izy io, anisan'izany ny famantaranandro, ny tsimokaretina sy ny fivoahana, ny singa, ary ny lohazy. Ny fiasa dia mety ilaina raha toa ka mahatonga ny loha-bary ny hafanana, ary manampy amin'ny vidin'ny fanamboarana . Ny zava-drehetra dia heverina fa sarobidy ny vidin'ny fananganana maotera iray hafa haharitra 100.000 miles na mihoatra.
Ny Fiara Fastest World Maneran-tany
Ahoana ny fanodinana kodiarana?
Ny fiara madinika indrindra manerantany
Ahoana ny fomba hanoloana ny mpihinam-bolamena?
Ny tantara mahavariana momba ny dity moana
Zavatra tsy fantatra sy fantatra momba ny Volkswagen Touareg
New Exotic Cars ambanin'ny $ 100k
Zavatra tsy dia fantatra loatra momba ny Scout international Harvester
Ny traikefa azo antoka indrindra ampiasaina amin'ny tsena
Fomba folo amin'ny fiarovana ny tenanao amin'ny fanandevozana SUV sy minivan
Antony hamidy Modely Jeep Wrangler tsy voafetra
Fandrafetana kolikoly vahaolana
Famaritana sy ny fanazavana
Mont Blanc no tendrombohitra avo indrindra any Eoropa Andrefana
Presta Valve - Inona ny Valan-tsoratry ny Presta?
Famaritana frantsay avy amin'ny famaranana: fomba fampiasana azy ireo
Facts Momba ny Safodrano Noa
Dingana Lehibe ho amin'ny fidirana ao amin'ny Campus Main ao amin'ny Oniversiten'i Ohio
Nahoana no efa niparitaka ny zana-tsavily?
Sarintany 'Charlotte's Web'
Fikarohana ireo soplanety: Ny Misionan'i Kepler
Fepetra momba ny asan'ny polinesa
Calculus Limits Review, fanontaniana ary valiny.
Sikh Wedding Hymns of ny Anand Karaj fampakaram-bady
JoJo Starbuck: 3-Time US National Skiing Championship
10 fanorenana izay niova an'izao tontolo izao
Manaova fanatanjahantena miaraka amin'i "Petera sy ny Wolf"
Ahoana ny fametrahana ny sensor'ny oksizenina
Filozofia momba ny fitarihana fampianarana ho an'ny mpitarika ny sekoly
250 tapitrisa ny evolisiona Turtle
Revolisiona Amerikana: Jeneraly Jeneraly John Stark